Malunga Nathi HEBEI XINTELI CO.,LTD
I-Hebei Xinteli lishishini eliselula elikhethekileyo ekungeniseni nasekuthumeleni ngaphandle, kwaye lithatyathwe kuhlaziyo lwezakhiwo zeenkampani zakudala eziphantsi kolawulo lukarhulumente lwangaphandle. IHebei Xinteli yasekwa ngoSeptemba wama-2008, kwaye iba lelona shishini liphezulu kwiPhondo leHebei leZinyithi neziMbiwa. .Uluhlu lweemveliso ze-Hebei Xinteli yi-mesh yocingo (i-hexagonal wire mesh, i-welding wire mesh), ucingo lwentsimbi (ucingo lwasendle, ucingo lwaseHolland), iimveliso zegadi, iimveliso zentsimbi kunye neemveliso ze-hardware.Sisebenzisa izinto ezikumgangatho ophezulu ezifana ne-carbon steel.Xinteli inokubonelela ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo zomphezulu wonyango.Izibilini, iPVC yatyabeka, ifakwe igalvanized ngePVC coated.Impahla iya kujongwa ngononophelo phambi kokunikezelwa, ukuze kunikezelwe ngomgangatho obalaseleyo kubathengi bethu.
Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwezolimo,ukhuseleko lwezilwanyana,imiyezo njl njl. Umda weshishini lethu ukwaquka ukungenisa kunye nokuthunyelwa kumazwe angaphandle kweentlobo ezininzi zeemveliso kunye nobuchule.Singena kumthengisi ongaphezulu kwiPhondo leHebei kwiimveliso zeMetal & Garden.
Kwiminyaka yakutshanje, uHebei Xinteli ugxile kuphando kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha.Ngeendlela ezintsha zokusebenza, uluhlu lwemveliso yethu luye lwandiswa rhoqo.Inethiwekhi yethu yokuthengisa nayo yomelezwa kakhulu.Iimveliso zethu ngoku zithengiswa ngempumelelo kwiimarike zehlabathi ingakumbi eYurophu, eUnited States of America, kuMntla Melika, Africa- Etc.Ishishini langoku leHebei Xinteli liphuhla ngamanyathelo azinzileyo.
UHebei Xinteli uneqela elibalaseleyo lababambi bamaphupho, elizele ngamabhongo, amandla kunye nobuchule.Sikholelwa ukuba, ngeenzame ezidibeneyo zawo onke amalungu, u-Hebei Xinteli ngokuqinisekileyo uya kuba lishishini eliphambili kwishishini lezorhwebo langaphandle laseHebei.
UHebei Xinteli uneqela elibalaseleyo lababambi bamaphupho, elizele ngamabhongo, amandla kunye nobuchule.